माइती पक्षले ह,’त्या गरेको दाबीसहित किटानी जाहेरी दिएको…. – Complete Nepali News Portal
माइती पक्षले ह,’त्या गरेको दाबीसहित किटानी जाहेरी दिएको….
माइती पक्षले ह,’त्या गरेको दाबीसहित किटानी जाहेरी दिएको यो प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा अभियोग दर्ता गरेको छ । प्रहरीले अनुसन्धान पुरा गरि मिसिल बुझाए पछि आज (आइतबार) सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत सुनसरीमा ४ जना विरुद्ध अभियोग दर्ता गरेको हो । सरकारी वकिल गोकुल निरौलाका अनुसार शारीरिक, मानसिक यातना दिएर आ’त्म,’हत्या गर्न दुरुत्साहन गरेकोमा अभियोग दर्ता भएको छ । ‘आ’त्मह’त्या गर्न दुरुत्साहन गरेको मुद्दामा अभियोग दर्ता भएको छ,’निरौलाले भने ।
सरकारी वकिल निरौलाका अनुसार अस्पतालबाट पोष्टमार्टम रिपोर्ट पनि मृ’त्यु’को कारण झुण्डिएर भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसअनुसार पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अभियोग पत्र दर्ता गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ । ‘डाक्टरको रिपोर्टमा नै प्रष्ट झु’ण्डिएको भन्ने छ,’उनले भने,‘भोली सोमबारदेखि प्रतिवादीहरुको वयान शुरु हुन्छ । त्यसपछि मात्र थुनछेक बहस हुन्छ ।’
गत भदौ २२ गते बिहान धरान ११ स्थित घरमा सुनिहाङ्माको मृ’त्यु भएको थियो । आफ्नै कोठामा पंखामा सलले पा’शो लगाएर आत्म’हत्या गरेको परिवारको दाबी छ । तर, प्रहरी र जनप्रतिनिधिहरु पुग्दा भने एक छिमेकी युवती र देवरले पाशोबाट झिकेर उनको शव खाटमा राखिएको थियो । त्यसैले माइती पक्षले हत्या आशंका गर्दै श्रीमान आइत माबोसहित ५ जनाविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीको आधारमा मृत’कको ससुरा, देवार र २ जना आमाजुसहित ४ जना पक्राउ परेका थिए । मृत’कका श्रीमानका परिवारले भने ह’त्या नगरेको र बुहारी बाच्छिन् कि भन्ने आशामा पाशोबाट झिकेको बताउदै आएका छन् ।मृ’तक सुनिहाङ्माको करिब ३ महिना अघि मात्र आइत माबोसँग विवाह भएको थियो । आइत सिंगापुरे लाहुरे हुन् । उनी अहिले पनि सिंगापुरमा नै छन् । विवाह अघिको प्रेम सम्बन्धलाई लिएर मानसिक तनाव दिने गरेको माइती पक्षको आरोप छ ।